Nleba enyo enyo na Karaman | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region70 KaramanMpempe ahụ edeputara na ntụgharị na Karaman
20 / 10 / 2019 70 Karaman, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Obodo Karaman, ebe nnochi anya na uzo di warawara banyere uzo abuo ndi apuru apu nke enyo enyo enyo enyo dika enyo.
Directorate Karaman nke ationgbọ njem ụgbọ mmiri na-aga n'ihu na-agba mbọ iji mee ka ọpụpụ nke okporo ụzọ site na itinye enyo na ụzọ gafere ebe ọhụụ na-adịghị. Onye isi obodo Savas Kalayci, Mgbanwe Industriallọ Ọrụ Akwa Bridge na Larende Underways n'akụkụ ụzọ ọpụpụ, na-egosi na akụkụ nlele adịghị ike, kwuru na ha na-eme ka usoro okporo ụzọ dị mma site na itinye enyo.
Mayor Kalaycı kwuru na ha gara n'ihu na -eme ọrụ na-ebelata okporo ụzọ obodo na-enweghị nkwụsị: “Dị ka ndị Karaman, usoro ụzọ anyị bidoro ịmepụta netwọ ụgbọ njem na-enweghị nsogbu na nchekwa dị n’etiti obodo. Iji gbochie ihe ọghọm okporo ụzọ yana ịhụ ka ụgbọala si n'akụkụ nke ndị ọkwọ ụgbọala na-abịa n'ụzọ dị mfe, anyị arụnyere enyo enyo anya na Interlọ Ọrụ Mgbanwe na Larende. N'ụzọ dị otu a, ndị ọkwọ ụgbọala si n'otu ụzọ ahụ na-ahụ ibe ha n'ụzọ dị mfe ma nwee ike ịga n'ihu n'ụzọ ha n'enweghị nsogbu. Obi dị ndị ọkwọ ụgbọ ala ụtọ nke ukwuu maka ịdị mfe nke usoro okporo ụzọ. Anyị ga-aga n'ihu na-etinye enyo ntụpọ ìsì na ntanye ndị achọrọ. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu Direction Services Direction anyị; gel Ọ na-aga n'ihu n'ọrụ ya, nke na-egbochi mmụba nke okporo ụzọ iji gbochie mbata nke ọmarịcha ogige, ma na-emegharị okporo ụzọ dị iche iche n'okporo ụzọ na akara ndị na-aga ije na obodo. "
A na-etinye Mpụpụ okporo ụzọ na Intersections na Çorum
President Altay na-eme nchọpụta na-aga n'ihu na mgbanwe
Ntụle zuru ezu site n'aka ụmụ amaala na Smart Intersections na Bursa
Ngwọta Njikọ 7 na Kocasinan Boulevard…
Denizli na-enwe mmeri na triangle bridge junctions
Okporo ụzọ gafere mgbe nnukwu mmiri gachara Ankara…
Nlekọta Ahụike Uche nke ụzọ ụzọ na njegharị
A ghaghị iwere ihe ndị dị na crossings
Mgbochi ihe mberede okporo ụzọ na Samsun
Bus na tram na-akwụsị site na ụmụ amaala Konya…
Naanị ịdọ aka ná ntị na nha na Trak Konak
Enwerela Line Konak Traft maka nnukwu volta
Na-azụ Ihe Ọdachi Na-adịghị Mma
Nleba enyo n’ogiri